- आफ्नो बहिनीको रहस्यमयी मृत्यु भएको भन्दै दाई पवन भुजलेद्वारा निश्पक्ष छानविनको माग’
आफ्नो बहिनीको रहस्यमयी मृत्यु भएको भन्दै दाई पवन भुजलेद्वारा निश्पक्ष छानविनको माग’
काठमाडौंः सिन्धुली कमलामाई नगरपालिका–७ गडौली सार्केटारका पवन भुजेलले आफ्नी १९ वर्षीया बहिनी पुष्पा भुजेलको रहस्यमयी मृत्यु भएको भन्दै निश्पक्ष छानबिनको माग गरेका छन् ।
आज रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर पवनले यस्तो माग गरेका हुन् ।
उनले यही असोज १६ गते विहानीपख साँढे २ बजे आफ्नी बहिनीको रहस्यमयी मृत्यु भएको दाबी गरे । उनले भने, ‘यो रहस्मयमयी हत्या हो । यसको निश्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ ।’ उनले घट्नामा कमलामाई नगरपालिका–२ चियाबारीका आफ्नै ज्वाँई अमन भनिने गोपी थापाको संलग्नता रहेको पनि दाबी गरे । र, हाल निज थापा अनुशन्धानको लागि प्रहरी हिरासतमा रहेको पनि उनले जानकारी दिए ।
। पवनका अनुसार बहिनी पुष्पाले २०७७ असारमा गोपीसँग प्रेम विवाह गरेकी हुन् ।
घट्ना भएको मिति २०७७ असोज १५ गते दिउँसो बिहीबार बहिनीले आमालाई फोन गरेको पनि दाई पवनले सुनाए । उनले भने,‘घट्ना भएको अघिल्लो दिन बिहीबार दिउँसो बहिनीले आमासँग फोनमा कुरा गरेकी थिईन्, र भोलिपल्ट शुक्रबार भेट्ने कुरा थियो । बिहीबार साँझ ८ बजे बहिनीले ठूलो ममीको छोरालाई फोन गरेर दादा म भोलि तपाईकोमा आउँछु भनेकी थिईन् । हाम्रो ठूलो ममीको छोरा चोकमा डेरा गरेर बस्नुहुन्थ्यो, उहाँ पेशाले चालक हो । तर, असोज १६ गते साढे २ बजे राति ज्वाँई भन्ने केटाले फोन गरेर पुष्पाको पेट फुलेको छ । श्वास फेर्न गाह«ो भएको छ । गाडी लिएर आउनु भनेर त्यही दाईलाई फेरि फोन गरेको छ । उहाँले त्यतिवेला मसँग बाईक पनि छैन् । अहिले गाडीपनि छैन् भनेर भन्नुभएको रहेछ । उहाँ एक जना चिनेकै सहचालकसँग चाबी मागेर साढे २ बजे राति गाडी लिएर जानुभयो । जाँदाखेरि बहिनीको घरको बाटोअघि ज्वाँईसहित चार जना पुरुष, र एक जना महिलाले बहिनीलाई बोकेर ल्याएको र ती युवाहरु फिजिकल्ली मादक पदार्थ सेवन गरेको या अचेत अवस्थामा रहेको पनि दाईले बताउनुभएको छ ।’
अस्पतालको ईमर्जेन्सीमा पुर्याउँदा अस्पतालले एक्सपायर भैसकेको जानकारी दिएको उनले सुनाए । ‘अस्पताल परिसरमा पीडक पक्षका एक जना केटाले फोनमा कसैसँग पुष्पाले सुसाईड गरिन् भनेर बोलेको सुनेपछि मेरो दाईले सोध्नुभयो, अघि त विरामी भन्दै हुनुहुन्थ्यो, अहिले सुसाईड भन्दै हुनुहुन्छ, किन? भनेर सोध्दा तपाईं डराउनुहुन्छ भनेर त्यो युवकले रोएको नाटक गरेको पनि मेरो दाईले सुनाउनुभएको छ ।’
बहिनीको हत्या भएको लागेर दाईले त्यहीँबाट फोन गरेर आफूहरुलाई बोलाएको सुनाउँदै पवनले भने,‘ममी त बहिनीलाई देखेर बेहोस हुनुभयो । हामी विहानीपख ३ बजे अस्पताल पुगेका थियौं । मैले त्यतिनैखेर घट्नास्थलमा कतिखेर जाने ? प्रमाण नष्ट हुनु सक्छ भनेर अस्पतालमै हुने प्रहरीलाई आग्रह गरेको थिएँ । उहाँले ६ बजे पछि जाने भन्नुभयो । र, विहान सवा ६ बजेतिर मुचुल्का उठाउनको लागि प्रहरी घट्नास्थलमा पुगेको थियो ।’
उनले घट्ना सधैं सुत्ने कोठामा नभई अर्को कोठामा भएको र उक्त कोठामा ह्याण्डल पनि नभएको सुनाए । उनले भने,‘त्यो कोठामा चुकुलपनि छैन् । पूर्वपट्टीको वाल खुल्ला छ । बहिनीले खुट्टामा लगाएको पाउजु जस्तोको त्यस्तै छ । हातमा लगाएको रिङपनि हातमै छ, तर शरिरमा लगाएको गहना चाहीँ छरिएर रहेको अवस्था छ । नर्मल सल लाईटर लगाएर जलाईएको छ । सलपनि, दुई जनाले तानेर बीचमा आगो लगाएको जस्तो शेप छ । घटनास्थलमा बहिनीको गहना फुत्किएको अवस्थामा छ यस्तो प्रकृतिको घटना कसरी आत्महत्या हुनसक्छ ?’ पत्रकार सम्मेलनमा सामाजिक अभियन्ता रोसा श्रेष्ठपनि सहभागी थिईन् ।
प्रकाशित मितिः २०७७ साल असोज २६ सोमबार, १९:५३